Chọpụta ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eme na mkpọchi coronavirus na-abịanụ: Martin Vrijland
isi mmalite: mirror.co.uk
Onye isi obodo Amsterdam Femke Halsema apụlarị ụnyaahụ ndumodu na mkpochi mkpọchi maka Amsterdam agaghị abịa na mberede. Gbanye 18 March De Telegraaf kọrọ na ndị uwe ojii na-akwadolarị maka njigide zuru oke. Nkwupụta ahụ na Telegraaf nke ụnyaahụ na ọrịa efe efeghachila, ọ dị ka ọ na-ekwu na nsogbu a adịla abụọ, n'ihi na ya na coronavirus nke yiri ka ọ na-agbasa na Brabant yana ọrịa na-efe efe, Rutte ga-enwe alibi iji họrọ mkpọchi zuru ezu.
Kedu ihe nke ahụ pụtara n'ụzọ doro anya? Nke a pụtara na ahapụghị gị ịpụ n'ụlọ gị, ebe a na-enyocha ndị mmadụ nọ ebe niile, ejide gị ma ọ bụrụ na inwe obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ ihe ị ga - egosi na ịnwere nje ahụ ma ọ bụ na ị naghị eso ụkpụrụ (iwu). Akọwara m ihe ọ pụtara n'ụzọ zuru ezu ebe a.
Biko gbasaa ozi dị ka nke a site na Bloomberg, onye kwupụtara na 99% nke ndị nwere nje na intali enwelarị ọrịa ndị ọzọ na ntinye nke ọgwụ a na-achịkwa kwuru na ọ nwere ike ibute nsogbu obi n'ihi mmụba nke mkpụrụ ndụ ọbara uhie, mgbe ahụ ị nọ n'ihe ize ndụ nke ịtụ mkpọrọ. Na South Africa, ha ewebatalarị iwu ahụ ma ị nwere ike ịga mkpọrọ rue ọnwa 6 ma ọ bụrụ na ikesara ozi ndị na-emegide nkuzi gọọmentị. A ga-anapu ikike imebi ikike a niile.
Ọ bụrụ na nke a ga-eme gị na Netherlands, ikekwe ị ga-ewerekwa ọgwụ mgbochi. Emebielarị iwu na Netherlands. Iwu a malitere ịdị na 1 Jenụwarị 2020: Iwu mmanye GGZ. Ọ bụrụ ngbanyeghị ọnụ, ikekwe ị ga-abanye n ’ụlọ iche maka onwe gị ruo mgbe ị riri ọgwụ. Also ga-anabatrịrị mkpụrụ ndụ dị n'ahụ gị, n'ihi na nke a kwuru na iwu.
Okwu a bụ 'mkpọchi mkpuchi' abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe na-erughị 'iwu agha', nke a makwaara dị ka 'ọnọdụ mberede'. Ndị agha na ndị uwe ojii na ndị omekome nọchiri anyị anya. N’oge na-adịbeghị anya, a zụrụ ha ka ha ghara ile mmadụ anya, kama, naanị ịrụ ọrụ. "Befehl befehl!"
Anyị na-eche na anyị na-enwe ụkọ-acha anụnụ anụnụ mgbe niile n'okporo ụzọ. Uwe a na-acha anụnụ anụnụ ka ejiriwo ụdị agha dị ka nke dochie anya ya, akwa, ịgba na mmiri, ma ọ bụ ngwa agha ama ama. Ogologo oge ole ka ọ ga-adị tupu ọnụọgụ ndị mmanye ego anabatakwa ngwa agha? Na mbu Anọ m ebu amụma na a ga - ebuga ndị agha agha ma nwee ezigbo ohere na nke a bụkwa ihe kpatara na ndị agha America bịarutere Vlissingen n'izu gara aga. Ha nwere ike inye aka n'ọtụtụ mba EU.
Ihe niile m buru n’amụma ugbu a emezuola. Yabụ na enweghịzị akpọ m onye isi ike ma ọ bụ onye na-eche echiche ọjọọ. Ntughari bu ikpe. Onye ọ bụla chere na m bụ onye na-eche mbibi nọ n'ụlọ ugbu a ma na-ahụ ihe m buru amụma kpọmkwem. Nwere ike gụọ akụkọ sitere n’izu ole na ole gara aga.
Enwere m ike ibu amụma ndị a n'ihi na a na-ahụ m site na edemede edemede. Akọwaara m akwụkwọ edemede ukwu ahụ n'akwụkwọ m. Maka onye obula guo akwukwo a ụfọdụ mgbakwunye dere. Ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe odide ahụ nakwa na ị gụọ akwụkwọ ahụ n'ezie site na mkpuchi ruo na isi. N'akwụkwọ ahụ, nke m bipụtara na mbubreyo afọ gara aga, m buru amụma na ọrịa ga-efe efe ọzọ ga-esi na mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi ụwa niile.
Na isiokwu nke March 18 Akọwara m otu esi akpata ọrịa coronavirus ahụ bụ ihe dị mkpirikpi nke usoro ọchịchị Kọmunist. Na Nọvemba 25, 2019, akọwara m etu isi ike mmadụ na ọchịchị onye kwuo uche ya sibụ abụ ihe nkwadebe maka komunizim a. Ọ bara uru pịa njikọ ahụ ma gụọ isiokwu ahụ.
Ọ bụrụ n’uche ugbu a na ihe na-aga nke ọma na ochichi onye kwuo uche ya ga-alọta n’izu ole na ole ị ga-enwetakwa ikike gị ọzọ, m ga-achọ ichetara gị na anyị nwekwara nsogbu ihu igwe. A sị ka e kwuwe, anyị kwesịrị iwepụ ikuku ikuku CO2 ngwa ngwa ka anyị ghara ịnwụ n'ime afọ iri na abụọ. Ozugbo anyị ji ụgbọ ala na-efegharị na efegharị n'ime oge ọnwa ole na ole, enwere ike ịkọ akụkọ na-egosi etu etu usoro ndị ahụ si bụrụ ihe ịtụnanya maka ọkwa CO12 tụọ ma anyị nwere ọnọdụ ọhụụ iji lekọta ọnọdụ mberede. .
Ọgbaaghara na-abịa ma Telegraaf kwupụtara na ozi March 18 kpọtụrụ aha (banyere ndị uwe ojii na-akwado maka mkpọchi) na a na-atụ anya ka ndị mmadụ tufuo nghọta na ndidi n'oge ụfọdụ. Mgbe ahụ ha dị njikere iji aka siri ike mee ihe. Ogwe aka ahu di ike.
O buru amụma na ndị mmadụ ga-atụ ụjọ, maka na ọ bụghị mmadụ niile nwere nri ga-ezuru ego ga na-amachibido iwu. Nke a pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ na ntụtụ (ma ọ bụrụ na ị gafere ụgwọ dị ogologo maka ụlọ ahịa) na ụfọdụ ndị ọrụ na ndị na-arụ ọrụ onwe ha ga-ahapụ n'enweghị ego n'ihi na enyemaka steeti ahụ e kwere na nkwa ga-ewe ọtụtụ izu ruo ọnwa n'ihi ụgwọ ọrụ ahụ. .
Ì chetara ọgba aghara ndị na-adịbeghị anya n’ụlọ ọrụ ụtụ isi? Nke ahụ mere na July 2019 ma. Yabụ ọ bụrụ na steeti na-ewere ụdị usoro ọhụụ na mberede wee guzobe usoro nchịkwa ọhụụ iji nye ndị mmadụ ezigbo ego, ị nwere ike ịtụ anya na nke a ga-aga nke ọma ugbu a? Ee e, ọ bụghị n'ezie. Ọ na-aghọrọ m nnọọ agbagha na omume. Mgbe ndị mmadụ na-emefukarị ego, nri anaghị akọ ha. I nwere ike iche ihe ndị agụụ na-agụ ga-eme.
Ajụjụ ọtụtụ ndị ga-ajụ n'ọdịnihu dị nso:Nje virus a na-akpọ corona dị nnọọ njọ nke na o ruru ihe a niile?"
Ajụjụ kachasị ukwuu ọtụtụ na-eche ihu bụ: Kedu ihe m ga - eme? Kedụ ka m ga-esi mee ihe niile siri ike a? Gịnị ka m ga-eme ma ọ bụrụ na mụ ekwenye n’ihe?
Enwere m ike ịza ajụjụ ndị ahụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịgụla akwụkwọ m. Otu ihe doro anya: ị nwere ikike bụ isi iji nweta nnwere onwe zuru ezu!
Ọchịchị komenti ọhụrụ, nke na - agbasa ugbu a n'okpuru njigide "mkpọchi coronavirus", ga - anwa iwepu ikike ndị a niile ma ọ bụrụ na ịmeghị ihe ọ chọrọ. Nke a pụtara na a ga-ejide gị ma ọ bụrụ na ịgbanyeghị ọnụ. Enweghị m ike ịme ka ọ maa mma karịa ya. Ejirila m afọ asaa nke ndụ m iji dọọ ndị Dutch aka na ntị ma furu efu ihe niile (n'ihi mkpọsa smear ịntanetị). Ama m na nke a ga-abịa ma nwaa ịdọ aka na ntị. Mana enwere olile anya! Enwere olile anya di egwu!
Na akụkụ na-esonụ nke isiokwu a, m ga-akọwa olile anya ahụ ma kọwaa nke ọma ihe ị ga - eme. Enwere m ike inye nkọwa ahụ nye onye gụburu akwụkwọ ahụ, n'ihi na na-enweghị nghọta ahụ dị mkpa, ị gaghị enwe ike ịghọta ihe m na-ede. Ga-ebu ụzọ mata ihe ihe edemede a bụ ma ị ga-ebu ụzọ ghọta ihe ihe na-eme. Ya mere, buru ụzọ gụọ akwụkwọ ahụ wee gụpụta akụkụ nke edemede a.
Ka op: O nwere ike ịbụ edemede m nke ikpeazụ, n'ihi na ahapụwo m Netherlands afọ ole na ole ugbu a wee chọta onwe m na obodo ebe ngụkọta ngụkọta ahụ dịlarị na enwere ike ijide m oge ọ bụla. Yabụ ọ bụrụ na ịhụghị ihe ọhụụ ọhụụ na - egosi na weebụsaịtị a, ị ga - ama ihe a.
Iji nọgide na-agụ akụkọ a, ị nwere ike ịghọ onye otu site na ịpị bọtịnụ 'nkwado gị'. Nke a na-eme ka ị nweta ohere ederede a. Reszọ a dị mkpa n'ihi na ị ga-ebu ụzọ gụọ akwụkwọ ahụ. Already bụbu onye otu sitere na € 2 / ọnwa wee si otú a na-akwado m ka m gaa n’ihu ịlụ ọgụ maka nnwere onwe gị.
Isi ihe omuma aka ekpe: parool.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl, nomorefakenews.com, nos.nl
Reader martinvrijland.nl pụtara igosipụta nnukwu ihe dike n'oge ara corona virus
Tags: mgbakwunye, pụtara, akwukwo, ihe, coronavirus, ọrịa, agba, ik, mkpọchi, Martin, aghaghị, fọrọ nke nta, praktische, Atụmatụ, mba n'efu, wat
Akwụkwọ zụtara! M na-eche ma nwee olileanya na ọtụtụ ga-eso. Onwe m abanyelarị ihe mgbagha dị oke egwu mgbe m gụrụ na m ga-awụ akpata oyi ma mba ndị ọzọ awụlarị akpata oyi. Na saịtị ndị ọzọ, agụrụ m mmeghachi omume maka nkatọ maka ihe eze ga-ekwu n'abalị a, mmeghachi omume dịka: “Gịnị kpatara ndị mmadụ ji enupụ isi mgbe niile mgbe ihe eze ga-ekwu, ka ọ bụrụ na ọ ga-adakwasị gị” EUH, mba! a na-anabata echiche siri ike!
Mmetụta “Mister Smith” dịkwa ugbu a ọfụma n'ihi na ndị mmadụ na-atụ ụjọ ma kwenye ihe niile ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbasa ozi, ndị ọkà mmụta wdg na-ekwu (gụnyere ndị na-eteta ma na-akatọ gọọmentị na MSM. thrownlaghachi n'uzo ha dara ura. Ha kwenyere ugbu a na MSM 100% ọzọ, n'otu ntabi anya, ha atụgharịwo nkatọ ha na gọọmentị ka ọ bụrụ okwukwe na-enweghị isi maka otu ọchịchị ahụ.
Nke a pụtara na ị ga-achọpụtakwa na 99% nke ndị gbara gị gburugburu ga-agba mbọ ịlụ ọgụ na ịwakpo gị dịka ndị akpọrọ "ndị ọchịchị", ozugbo ha matara na ikwenyeghị akụkọ ahụ na nchekwa ya. chọrọ ịga.
Enweelarịrị m nke a mgbe m gosipụtara ntakịrị obi abụọ banyere ihe ize ndụ nke nje corona. Ndị mmadụ wakporo m nke ukwuu na m '' mechibidoro '' ya na m kwesịrị ịghọta na nje corona dị oke egwu ma na m ga-eme ihere maka echiche m.
A na-ebuso m agha siri ike n'ịntanetị mgbe m gosipụtara na enwere ike gosipụta arụmọrụ nke Bruins site na "Holllywood" nakwa na ọ nwere ike ịgbaso nzọụkwụ nke "adịghị mma" R. Hauer. A wakporo m ozugbo (ikekwe site na IM) na m kwesịrị iweghachite okwu m, na ọ ga-achọpụta onye m bụ na ebe m bi ma jikere onwe m maka ọbịbịa ya na ndị enyi ya. Ọtụtụ ndị ọzọ “kwetara” ebusoghị m agha dị ka ihe iyi egwu nye mmeghachi omume m mgbe onye ụkọchukwu anyị mara mma.
Ego helikopta dika esi atụ aro ya na obodo dị iche iche bụ isi nke usoro ego dijitalụ. Ndị mmadụ na-atụfu ego ha na-akpata n'ihi nje Corona na ego na-ekwe nkwa mgbe ha hotara… .., ga-ahọrọ ịnakata ego ahụ n'okpuru ọnọdụ, yabụ ego dijitalụ nwere egwu na ụzọ akụrụngwa.
Michael32 dere, sị:
Mgbasa omempụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu:
Na Germany, ego na ntaramahụhụ maka ịkọ akụkọ na-adabaghị n'ime sistemụ n'oge na-adịghị anya:
Nke a na-esochi obere ozi "dịkarịrị adịgboroja" na akwụkwọ akụkọ kachasị na adịgboroja na Netherlands, De Telegraaf (ụdị ntanetị). Otu onye (akpọrọ ya aha na ihere na ọ bụ onye Alakụba iji mee ka ihe anyị na-emegide, nke ndị Alakụba rere ure wdg) achịrị ọchị n'ihu onye uwe ojii, o doro anya na a na-ama ya ikpe izu iri n'ụlọ mkpọrọ maka nke a. ikpe.
Nke a bụ ịhịa aka na mmụọ maka ezigbo iwu ga-eme n'ọdịnihu nke ịta ụta n'ihu ọha nwere ike ibuga mkpọrọ (enwere ike webata nke a na-adịgide adịgide ma metụta ịkwara ụkwara, wdg).
Ee, agụrụ m ya. Obi dị m ụtọ nke ukwuu izipụ akara ngosi: “Obere ọchị ma ọ bụ obere nnupụisi ị ga-aga nga. Mara ya. ” Ma ee, nnenke Alakụba na-emekwa nke ọma. E kwuwerị, ire ọkụ ga-akụrịrị ngwa ngwa oge ọgba aghara daa. Ha chọrọ ọgba aghara ma ha chọrọ agha obodo n'etiti ndị obodo ahụ na mpaghara Alakụba nke (mgbe nke a gasịrị, Erdogan ga-edobe ihe).
Berna B dere, sị:
Ndewo! . Ekele dịrị gị maka isiokwu niile ị na-ede ma mee ka anyị mara Martin. Abụ m onye otu ọhụrụ, enwekwara m ajụjụ maka gị. Kedu ihe ị dụrụ ndị Alakụba ọdụ ka ha mee n'ọnọdụ a? Think chere na a ga-eji ngwa agha mee agha a, ọ ga-abụ nke anụ ahụ? Also makwaara ogologo oge enwere ike igbachi anyị na Netherlands. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'ime ókèala Europe? Nke a ga - abụ nsogbu nye ndị nwere ezinụlọ na - abụghị Europe ma yabụ maka amaghị m ogologo oge agaghị ahụ gụnyere m. Nke a nwekwara ike ịkpasu ndị mmadụ iwe. think chere na ọnọdụ a nwere ike imeworị n'oge ọkọchị a? Ma ọ bụ karịa kwupụta 2023? Kedu mba a ga-ahapu na ndi mmadu adighi igba ogwu? Think chere na anyị nwere ike ịgba ọsọ site na ịgba ọgwụ mgbochi? Ọzọkwa ihe onwe gị. I kwuru na ịnọ na mba a na-akpọchi akpọchi. Not nwebeghị ike ịhụ na onwe gị tupu oge ahụ ka ọ bụ na ị nweghị ike ịhapụ ya maka ihe ndị ọzọ? Enweghị echiche ọ bụla ebe ọ ga - adị nchebe. Agwaetiti nke enwere mmadụ ole ma ole ma ọ bụ ihe? ma ọ bụ mba nke ga-adị ntakịrị mmiri? ekele tupu 🙂
Daalụ. Guo ihe edere n’ime izu iri abụọ gara aga, ị ga-ahụ azịza ajụjụ gị. Ana m akwadokwa ịgụ akwụkwọ ahụ, n'ihi na nke ahụ bụ ntọala; o bukwara ndi muslim.
Ahaghị m n'ihi na enweghị m ego, kamakwa n'ihi na amaara m na ọ baghị uru ịnọ n'ụwa. Nkpueze okpueze a bụ atụmatụ nke atụmatụ nke Lucifer (lee akwụkwọ).
Ebee ka ịchọrọ ịnọ. N'àgwàetiti a na-ebighị
Lekwaa anya na nkeji 1; 58 “enweta ọgwụ mgbochi”
verdo dere, sị:
Daalụ. Already nyela iwu akwụkwọ gị? Anaghị agụ akwụkwọ ọbụla, ugbu a ọ ga-abịa
N'oge Council of Minister, ndị ozi na-esetịpụ ezi ihe nlereanya taa: a na-ahụ ha nke ọma.
“Ẹkpan̄ utọn̄ ẹnọ kiet eken”
Nọgidesiri ike n'iwu ma ọ bụ ihe ọzọ ga-emebi ”
N'ezie, anyị abanyelarị n'ọchịchị ọchịchị aka ike n'ihi na ọ nweghị ndị dị adị n'ezie
mmegide dị. Ọzọkwa onye ọ bụla gbara nkịtị, ndị dike na slippers.
Asị m Martin na ndị na-eke akwụkwọ na saịtị a, unu bụ ezigbo dike. Martin naanị na-aga na nke ahụ bụ ọrụ gị n'ụwa a, nke enyere ya 'chi' ma ọ bụ onye ọ bụla.
Agbanyeghi na abughi m 'Christian' achoro m izo aka
Ndị Efesọs 6:11 chịkọtara nkenke maka anyị ịgba mgba megide anụ arụ na ọbara mana megide ndị isi ọchịchịrị.
Nhọrọ dị mma na ihe ọjọọ. Ndị mmadụ na-ahọrọ ime ihe ziri ezi mgbe niile, ọ bụ ezie na ụzọ ahụ kacha sie ike.
Ịdị Ọcha dere, sị:
"Biko rịba ama: nke a nwere ike ịbụ edemede ikpeazụ m."
N'agbanyeghị nke a, enwere m olileanya na ị ga - anọgidesi ọnagide nke ezigbo nje. Anyị niile nọ n'okpuru ndị na-ekiri ihe, anyị niile na-enwe oge ihe isi ike. Ka ike dịrị gị.
Lezie anya ma kelee gị.
Martin ihe edemede gị na ihe ị ga-aza ga-ekwu na ihe ndị a. O nweghi ihe a ga - eme ọzọ gbasara nke a, a na - akpọ ya mmepe. Emelarị nje virus, anyị agbadaghị maka obere oge.
Mgbe ndị mmadụ tokọtara ọnụ, ọ na - aghọ ihe na - atụghị anya na ọ ga - adị elu karịa ihe ọ bụla na mmadụ niile, tinyere chi nke ụwa a!
N'ụzọ nke a, anyị na-ezute nna mbụ nke echiche anyị ma kpọtụrụ ezi Chineke n'azụ ụwa a. Ọ gaghị abịa ebe a n'ihi na ugboro ugboro ebe a dị obere. Naanị anyị nwere ike igosi ezi Chineke site na ezigbo ìhè, ịhụnanya na eziokwu.
Ọ bụ ya mere ụwa a ga-eji kpọọ anyị asị, ma anyị na-eje ije nhụsianya, anyị abaghịkwa na mmiri.
Mara onye ị bụ na ebe i si bia.
Oroma dị n’elu, anwụ dị n’elu. Anyị si n'ọtụtụ ebe wee bịa, ekwela ka onwe gị kwuo okwu!
Gee ntị nke ọma, ọ bụ asụsụ anyị ma ọ nọrọ kemgbe!
Banyere xanders, xandernieuws dara dika m si eche. Enwere m ike ikwu na saịtị Ndị Kraịst nwere ike ịka mma karịa ịgha mkpụrụ ahụhụ?
Enwetara m nkọwa dị mma mana agaghị ekwenye m, ikekwe n'ihi ụzụ nkaaka 😉
Isi okwu n’ájá ájá
Anyị ga-ahọrọ: ụwa ochie, anyị bụ ndị dị egwu.
ma ọ bụ na ọ gwụchara anyị guzoro nhụjuanya.
Ee, Xander ga-ejupụta n'ụjọ
Enweghị m ike iche n'echiche na akụkọ xander abụghị mmegide a na-achịkwa (mana ọ nwere ike ịbụ ihe ọjọọ) n'ihi na enweghị m ike iche n'echiche onye na-eteta iji chee echiche nke ọma (nke a bụ nnukwu nsogbu maka 99% nke ndị bi na na ya mere na ụwa) na akụkọ nnwere onwe na-ada maka ọnọdụ a na-akpata nsogbu ụwa.
N'iburu n'uche nkwalite nke egwu coronavirus (ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Netherlands), enwere m ike ikwubi na Xander anwaala ịbanye n'ogige m n'oge mmalite iji jide ntụziaka nke ndị na-agụ ya. O gosiputara ezigbo ihu ya.
Nke a ekwesịghị iju anyị anya. Otutu ndi mmadu na - agbasa bu ndi imara. Ha na-eji aha 'illuminati' maka egwu na-agbasa echiche iji mee ka ndị nkịtị nwee mmetụta na-adịghị mma. Nke ahụ masịrị ha maka atụmatụ ha. Ọ bụ ihe ịtụnanya na ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha, ee, ndị nwere nje 'na-agbasa ma na-anwụ n'ezie.
O doro anya na ha achọghị ịgbalị ime ihe ahụ. Ndị mmadụ anaghị adaba maka atụmatụ ọjọọ ha ma na-ele anya ziri ezi. Mgbe emezichara, ndị ọrụ eziokwu sitere n'aka ndị nkịtị ga-abịa ahịa ha ma jee ije dịka emere na South Africa. Nke a ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na ndị nkịtị chọrọ ya.
" Nghọta Ejiji na Egwu Coronavirus nke Dr. Wolfgang Wodarg?
Mgbe ngụkọta mkpọchi coronavirus na-abịa na ihe ọ dị ka ya: akwụkwọ nyocha na ndị agha »
Nleta nile: 1.367.234